အခမဲ့ရုပ်ရှင်တွေလည်း RepelisPlus APK နှင့်များစွာသောစီးရီး !! | Androidsis
[APK] RepelisPlus ဖြင့်အခမဲ့ရုပ်ရှင်ကားများ
Francisco Ruiz | | Android application များ, လဲ tutorial
ကျနော်တို့ကစနေ၊ တနင်္ဂနွေမတိုင်ခင်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုမယ့် Android အတွက်ကောင်းတဲ့အခမဲ့ application တစ်ခုကိုယူဆောင်လာချင်တယ် ဗွီဒီယို streaming များမှရုပ်ရှင်ကားများကိုကြည့်ပါ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်အချိန်မရွေး၊ တက်ကြွသောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲသူတို့ကိုကြည့်ရှုရန်။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်ယူဆရကျွန်တော်ရှိသည်ဖို့သွားကြသည်သောလျှောက်လွှာ ပြင်ပ Google Play Store သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ, နာမကိုအမှီပြုသည် elရာဝတီ ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတာပါ။
ဒီကိုရရန်အကောင်းဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်း RepelisPlus apk ဒါကအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android မှအခမဲ့ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ပါ LocalCast မှတဆင့်အခမဲ့ရုပ်သံစီးရီးများကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းအပြင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းအပြင်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားသို့ပေးပို့ပါ။ Android အတွက်ကြေးနန်း နှင့်သင်၏အမည်အောက်တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android အုပ်စုသို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းသို့အခမဲ့စာရင်းပေးသွင်းပါ Aရာဝတီ o အောက်ပါ link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
Androidsis အုပ်စုကိုယ်တိုင်မှသင်အုပ်စုအမည်ကိုနှိပ်ခြင်း၊ မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များကိုရိုက်ထည့်ခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ အဆိုပါ Androidsis Group မှတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် Android အကြောင်းပြောဆိုရန်နှင့်သင်လိုအပ်သည့် apk ကိုရှာရန် group သို့မဟုတ်သင်၏ Android ကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူ ၇၀၀ ကျော်ကျော်လွန်ပြီး၊ သင့်ကိုလက်မောင်းများဖြင့်လက်ခံလိမ့်မည်ဖြစ်သောသင်၏ Android ကိုပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန်အကြံဥာဏ်။
အကယ်၍ သင်သည် Telegram နှင့်၎င်းမှရရှိသောကောင်းကျိုးများအားလုံးကိုဤ Android နှင့်ပေါ့ပါးသောနှစ်များဝေးသော Android အတွက်အခြားလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application များနှင့်မတူပါက၎င်းကိုသာရရှိမည်ဖြစ်သည်။ RepelisPlus ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့်ရပ်တန့် အတွက် လျှောက်လွှာ၏နောက်ဆုံးပေါ် apk ကိုတိုက်ရိုက်အဲဒီမှာရယူပါ.
သင်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် RepelisPlus ၏တရားဝင်လျှောက်လွှာအလွန်လှပသောအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်နှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ပေးသည်။ ထို့နောက်သင့်အားဤလိုင်းများအထက်တွင်ထားခဲ့သည့်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်အကြံပေးပါသည်။ ၎င်းတွင်အရာအားလုံးနှင့်အရာအားလုံးကိုအသေးစိတ်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများဖြင့်ရှင်းပြသည်။ ။
သင့်တွင်ရှိသည့်ဗွီဒီယိုကိုယ်နှိုက်၏ဖော်ပြချက်တွင် Telegram မှတစ်ဆင့် apk ကို download လုပ်ရန်တိုက်ရိုက် link
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » [APK] RepelisPlus ဖြင့်အခမဲ့ရုပ်ရှင်ကားများ
Xiaomi သည်၎င်း၏ပထမဆုံး Mi Home စတိုးကိုအိန္ဒိယ၌ဖွင့်တော့မည်